Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Hiiraan. – Calamada.com
Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Hiiraan.
calamada January 23, 2017 1 min read
Wararka ka imaanaya gobalka Hiiraan ee bartamaha dalka Somaliya ayaa sheegaya in ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidin weerar culus ku qaadeen difaacyada iyo saldhigyada ciidamada Ridada Jabuuti ay ka sameysteen mid ka mid ah degmooyinka gobalka Hiiraan.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa si gaar ah u beegsaday difaacyada ciidamada Jabuuti ay ka sameysteen degmada Jalalaqsi gaar ahaan dhanka Galbeed ee degmadaasi.
Dagalka waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwanâ€™waxaa dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay xaafadaha kala duwan ee degmada iyo inta badan deegaanada hoostaga degmadaasi.
Dagaalka oo bilowday saqdii dhexe ee xalay waxa uu socday inka badan saacadâ€™iyadoona dagaalkan uu ka mid noqonaya dagaaladii ugu cuslaay ee ka dhacay degmadaasi.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo degmada Jalalaqsi ayaa sheegaya in Barqo nimadii maanta degmadaasi soo caga dhigteen labo diyaaradood oo noocyada Eelecobtar-ka ah kuwaasi oo goobta ka qaaday meydadka iyo dhaawacyada saraakiil iyo askar Jabuutiyaan ah.
Warar hoose ayaa sheegaya in ciidamada Jabuuti gabi ahaan maanta ay ka mamnuuceen masâ€™uuliyiinta iyo saraakiisha maamulka dowlada Ridada federaalka ugu magacaaban degmada Jalalaqsi iney gudaha u galaan xeradii xalay dagaalka uu ka dhacay waxeyna ciidamada Jabuuti diidayaan in la arko khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ah ee kasoo gaartay dagaalkaasi.
Previous: Dhageyso Sh Yuusuf Kabo Ku Dukade Oo Ka Hadlay Dilka Taliyihii Booliska Gobalka Shabeelada Dhexe.
Next: Shabaabul Mujaahidiin Oo Dagaal Kula Wareegay Degmada Afgooye.